मेडीसीटीको चरम लापरवाही, नवजात शिशुलाई अस्पतालमै छोड्न आमा विवस
अस्पताल भन्छः घर लैजाऊ
Share : 714
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका डा. उपेन्द्र महतो नेतृत्वमा सञ्चालन गरिएको भैसेपाटीस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको चरम लापरवाहीले एउटी आमाले आफ्नो नवजात शिशुलाई अस्पतालमै छोडेर हिड्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
पूर्वसांसद गायत्री शाहले जन्म दिएको नवजात शिशुमा डाउन सिन्ड्रोम देखिएपछि उनले अस्पताल र अस्पतालकी डाक्टर निरासिंह श्रेष्ठको लापरवाहीले यस्तो भएको भन्दै उनले बच्चा अस्पतालमै छोडेर हिँड्न बाध्य भएको विज्ञप्ति मार्फत जनाएकी छिन् ।
अस्पताल र चिकित्सकले गर्भवती भएदेखि नै शाहको प्रत्यक्ष निगरानी गरेका थिए । उनीहरुकै सल्लाहमा फागुन २८ गते मेडिसिटी हस्पिटलमा भर्ना भइ सोही दिन अप्रेसन गरेर बच्चाको जन्म भएको थियो । बच्चा गर्भमा रहँदा अस्पताल र चिकित्सकले बच्चाको अवस्था सामान्य रहेको भन्दै आएको शाहले उल्लेख गरेकी छिन् । तर बच्चा जन्मिसकेपछि मुटु, फोक्सो र गोडा समेत नचल्ने अवस्थामा जन्मिएपछि पूर्व सांसदसमेत रहेकी शाह छाँगाबाट खसे झैँ भएकी थिइन् ।
बच्चाको थप परीक्षणका लागि क्रोमोजोम एनालाइसिस गर्नुपर्ने भन्दै मेडिसिटी हस्पिटलले नै बच्चाको रगतको नमुना संकलन गरी भारत पठाएको थियो । भारतबाट प्राप्त भएको परीक्षण प्रतिबेदबाट बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम देखिएको हो ।
गायत्री शाहले विज्ञप्तिमा भनेकी छिन्, ‘मैले हस्पिटलबाट स्वस्थ बच्चा लिएर घर फर्किनुको सट्टा हस्पिटलको लापरवाहीका कारण नाजुक अवस्थामा रहेको अस्वस्थ बच्चा जन्मन गएकोले मैले बच्चालाई लिएर घर फर्कन नसकेको र बच्चाको उपचार खर्च समेत धान्न सक्ने अवस्था नरहेकोले मेरो बच्चालाई मेडिसिटी हस्पिटलमा नै छाडी गएकी छु ।’
हस्पिटलको लापरवाहीका कारण अस्वस्थ जन्मिएर हस्पिटलमै छोडिएको बच्चाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हस्पिटलले व्यहोर्नुपर्ने माग शाहको छ । उनले बच्चाको उपचारमा पुनः लापरवाही भएर बच्चाको ज्यान जोखिममा परेमा त्यसको सम्पूर्ण भागिदार अस्पताल हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई बोदार्ध लेखेकी छन् ।
उनका आफन्तहरू अस्पतालमै धर्ना दिएर बस्न बाध्य भएका छन् । देशकै सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न भनेर प्रचार गरिएको महंगो अस्पताल मेडिसिटीले लापरवाहीपूर्वक पूर्व सांसद शाहको कोखबाट डाउन सिन्ड्रम भएको बच्चा जन्मिएपछि आफूहरु धर्नामा बस्न बाध्य भएको उनका आफन्तहरु बताउँछन् । ‘अस्पतालले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेकाले यस्तो बच्चा जन्मिन पुगको हो । अब यो बच्चाको जिम्मा अस्पतालले नै लिनुपर्ने मागराखी धर्ना बसेका हौं’, पहिलो संविधानसभाकी सभासद शाहले अक्षरपाटीसँग भनिन् ।
शाह गर्भवती अवस्थादेखि नै शाहको स्वास्थ्य चेकजाँचमा मेडिसिटीकी वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा.निरासिंह श्रेष्ठ संलग्न थिइन् । डाउन सिन्ड्रम भएको बच्चाको शारीरिक अवस्था अरु समान्य बच्चा जस्तो हुँदैन । शारीरका अंगहरुको स्वभाविक विकास नहुने भएकाले यस्तो बच्चाले समान्य बच्चाजस्तो काम गर्न सक्दैन । बेलाबखत डाक्टरको निगरानीमा राखिरहनुपर्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार क्रिटिकल डाउन सिन्ड्रम भनेको बिकलाङ्ग जस्तै हो ।
‘बच्चा जन्मेपछि अब्जरभेसनमा राख्नुपर्छ भन्दै सघन उपचार कक्षमा राखियो । पछिमात्र हामीलाई बच्चाको अवस्थाबारे जानकारी गराइयो’, गायत्रीका पति राजेश शाहले भने । पटक–पटक गर्भवती जाँच र दुई÷तीन पटक भिडियो एक्सरे गर्दासमेत डा. श्रेष्ठले ‘गर्भमा रहेको बच्चाको अवस्था नर्मल छ’ भनेर जानकारी गराउनु चरम लापरवाही भएको राजेशको भनाइ छ ।
घर लैजाउ भन्छ अस्पताल
‘भिडियो एक्सरेबाट थाहा हुने कुरामा डाक्टरले लापरवाही गर्दा क्रिटिकल डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा जन्मियो । अब्जरभेजन भन्दै एनआईसियूमा राखे । अहिले डिस्चार्ज गरेर लैजाउ भन्दै छन’, राजेशले भने, ‘यस्तो बिकलांग बच्चाको पालन पोषण कसरी गर्ने ? यसको हेरचाह र उपचारको जिम्मा अस्पतालले लिनु पर्छ ।’ अस्पतालले गल्ती स्विकार गरेर बच्चाको हेरचाह र उपचारको जिम्मा नलिएसम्म बच्चा डिस्चार्ज गरेर नलैजाने उनीहरुको अडान छ ।
डा. श्रेष्ठ भने डाउन सिन्ड्रम भिडियो एक्सरेबाट थाहा नहुने जिकिर गरेको पीडितहरुको भनाइ छ । डाउन सिन्ड्रमको रुटिन टेष्ट गर्ने प्रोकोटल र सुविधा नेपालमा नभएको डा श्रेष्ठले बताउने गरेको उनीहरुले भने । ३५ वर्ष उमेर पार गरेका महिलालाई शंका लागे यसको टेष्ट गराउनु पर्ने तर गायत्रीको उमेर ३४ बर्ष भएकाले डाउन सिन्ड्रमको परिक्षण गर्न आवश्यक नठानिएको उनले बताएको आफन्तहरु भन्छन् ।
मध्य वानेश्वरमा नेपाल हेल्थ क्लिनिक डा श्रेष्ठले सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन् । सुरुमा गायत्रीले उनकै क्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गराएकी थिइन । डा निरासिंह श्रेष्ठकै सल्लाहमा गायत्री सुत्केरी हुन मेडिसिटीमा भर्ना भएकी थिइन् । अस्पतालले भने यस विषयमा आधिकारिक जवाफ दिएको छैन ।